अदालतको अपहेलना भो, पूर्जी काटौँ श्रीमान् ! « Ok Janata Newsportal
अदालतको अपहेलना भो, पूर्जी काटौँ श्रीमान् !
काठमाडौं । न्याय क्षेत्रमा सबैले ‘गुरु’ मान्ने बरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीलाई प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक मञ्चमा गाली गरे ।
सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनबारे जारी बहसलाई ‘तमासा’को संज्ञा दिए । प्रधानमन्त्रीको सो ‘बोली’ बारे संवैधानिक इजलासमा प्रश्न उठेको छ ।
सपना ः संविधानको धारा ८५ (१) र ७६ (७) मा विघटनको कुरा गरेको छ नि ?
दिनेश ः धारा–७६ (७) इमर्जेन्सी डोर हो । यो डोर निकै साँघुरो छ, नियन्त्रित छ, स्वेच्छाचारी छैन् । शर्त सहित हो, लिमिटेड छ । धारा–७६ (५) अनुसार बनेको प्रधानमन्त्रीले मात्र सो डोर अनुसार विघटनको सिफारिस गर्न सक्छ, अरुले पाउँदैन् ।
विश्वम्भर ः विश्वासको मत लिन नसकेपछि ३० दिनसम्म सरकार रहन्छ अनि, त्यतिन्जेल अरुले दाबी नगरेको अवस्थामा के हुन्छ, त्यतिवेला कुन धारा आकर्षित हुन्छ ?
दिनेश ः त्यो हाइपोथेटिकल हो श्रीमान् । दावी गर्ने र नगर्ने कुरा संसदको सेसन नबसी थाहा हुँदैन् । मेरो भनाई के भने, फ्लोर टेष्ट नगरी थाहा हुँदैन् । हाउस बसेर बहुमत प्राप्त गर्न नसक्दा प्रक्रियामा जान्छ । त्यस्तो बेला, कसैले दाबी नगरे इमर्जेन्सी डोरतर्फ जान्छ । अन्यथा, विघटनको परिकल्पना गरिएको छैन् ।
अनिलकुमार सिन्हा ः संसदमा त धेरै दल हुन्छ, त्यसमा कसैले काम नै गर्न नदिए के हुन्छ ?
दिनेश ः (‘हाउ डेमोक्रेसी डाइज’ भन्ने पुस्तकको रेफ्रेन्स दिँदै)– ‘ओलीले संसदलाई काम गर्न दिनुभएन् । जुन देशमा जनप्रतिनिधलाई काम गर्न दिइँदैन त्यहाँ प्रजातन्त्र कमजोर हुँदै जान्छ । राजनीतिक दलले काम गर्न नदिएको कुरा न्यायिक निरुपण हुन सक्दैन् । सो प्रश्न राजनीतिक हो । राजनीतिक कुराको न्यायिक परीक्षण सम्भव छैन् । पार्टीले काम गर्न नदिएको विषयचाहिँ अदालतको क्षेत्राधिकार बाहिरको कुरा हो ।